Izindiza ezikhona, ngicela usize!
Okubalulekile Izindiza ezikhona, ngicela usize!
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #249 by JanneAir15
Sawubona! Nginentshisekelo ngalezo zindiza ezingabonakali. Sengivele ngazi okuthile ngabo ngakho nakhu engisafuna ukwazi. Ngakho-ke ngifuna ukwazi ukuthi yiziphi izinhlelo okufanele ube nazo bese kuthi uma wazi ezinye izinto ezibalulekile okufanele ngizitshele zona. Kepha ngicabanga ukuthi kuphelele. Hhawu! futhi uma uneziphakamiso ezithile zezindiza ezamukelekile zamukelekile!
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #250 by Dariussssss
Okokuqala, sawubona futhi wamukelekile kuForamu.
Okokuqala, udinga i-simulator yendiza. Bambalwa babo, futhi lokho kukhetha kuncike kwi-PC onayo, ngokuqondile iMicrosoft Flight Simulators 2004 kanye FSX,X-Plane futhi P3D. Zonke ziyi-payware, ngakho-ke kufanele ucabange ngaleyo ngxenye. Kukhona eyodwa freeware indiza sim, kepha lokho kubi kakhulu, ngakho-ke angifisi nokuthi ngichaze ngayo.
Ngemuva kwalokho kuya ngendiza, uzodinga indiza ethile. Okokugcina, iklayenti le-ACARS. Leyo ibuye ihluke kusuka ku-VA iye kwenye. Abanye banamakhasimende abo, awamakhasimende abo. Ezingasebenzisi, ikakhulukazi zisebenzisa amanye amaklayenti amadala kakhulu futhi angathembekile
Ngaphandle kwalokho, ungadinga izengezo ezithile ukuze uthuthukise ezinye izici ze-flight sim yakho, kodwa njengoba ngishilo, kungenzeka lokho.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #251 by Gh0stRider203
Mina uqobo ngingasikisela FSX, noma okwamanje. kuzofanele uyithole nge-Steam ngokuqonda kolwazi lwami iMS ayihambisani ne-Disk Version. Ngizobe ngifiphele .... inani le-Steam Edition liyi-STEAL ye-freak Ngikhokhele i- $ 60 ye- FSX: I-Gold Edition (i-Deluxe + Isengezo sokusheshisa), futhi ukhokha okuncane kakhulu ngakho. OLUNYE olwehliselwe phansi kulo akuyona ukuthi YONKE i-payware izosebenza, kodwa kulwazi lwami lokho kuluhlu olufushane.
Empeleni nginguMnikazi / i-CEO ye-American Airways VA futhi ngenkathi wamukelekile ukuthenga noma yiziphi izindiza ze-payware ozifunayo, asidingi ukuthi uthenge izindiza ukuze ube yingxenye ye-VA. UMA konke onakho / okufunayo kuyi-freeware, ngipholile ngalokho. Ngendlela ngiyibona ngayo ... impilo ingaba yi-B * TCH ephelele kwesinye isikhathi, ngakho-ke kungani uyenza ibe ngaphezulu kweyodwa? lol
Ngingumfana olele emuva. Ngizama konke okusemandleni ukusebenzisana nabashayeli bezindiza Bami, futhi nginikeza imivuzo ethile kulabo abasebenzayo (kusuka kumabhonasi "wemali" kuya ekubeni nendiza eyabelwe bona nje). Empeleni sisekelwa kwisayithi lama-en English (njengasendaweni ye-lol lol), futhi sisebenzise isoftware yabo yokulandelela indiza (okulula kakhulu ukuyisebenzisa i-btw). Futhi, ngingakunikeza ngayo yonke izindiza ze-freeware esizisebenzisayo (yize ezinye zikhona lapha lol)
Ngenkathi ngenza umthwalo omningi we-haul ende, ngoba yilokho okwenza i-VA ibe yimali ephezulu kakhulu, ngivumela abashayeli bezindiza bami ukuba banqume ukuthi yini abafuna ukuyenza.